boring writing – Pramb's Weblog
अप्रील 29, 2008 by PRAMB
राजधानीको प्रदुषण माग षुरा गराउने एक मात्र विकल्प भएका बन् हड्ताल र ट्राफिक जामले दिने सास्ती आफ्ना ठाँउमा छन् तर यी सधैँ खुखको पहाड बनेर मात्रै नआउँदा रहेछन् । त्यस्तो हुँदो हो त म पोखरा पुग्नै पाउँदिन थिएँ ।
सुन्दर तालनगरी’bout मैले थुप्रै सुने पढेकी मात्रै थिएँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा यस पालिको विन्टर भ्याकेसन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावविरुद्ध राजधानीका सडक तताइ एकै चोटिजसो परेका थिए । यसले मलाई पोखरा जान हुटहुटायो । संगिनी शिखाका साथ पाएँ ।
लोडसेडिङ्ग बलिरहेको साँझ हामी गन्तब्य पुगेका थियौँ । त्यहाँ पुगेपछि नै आनन्द अनुभूत हुन थाल्यो । भोलिपल्ट विहानको चिसो सिरेटोमा लेकसाइडबाट पहिलोपटक फेवाताल हेर्न पाउँदा अर्को रमाइलो थपियो । तालवाराही दर्शनपछि एघार सय मिटर उचाइमा निर्माणाधीन विश्वशान्ति स्तूप पुग्दाको अनुभव के बयान गरुँ ! त्यहाँबाट छर्लँगै देखिएका पोखरा नगरी मनमोहक हिमशृखंलाले पनि मन मोहे । प्याराग्लाइडिङमा चराझैँ उडेका मानिसको दृश्यले भिन्नै कौतूहल जगाइदियो ।
नाम चलेका तीनै गुफा मन्दिर माटेपानी गुम्बा बेगनास र रुपा ताल घुमेपछि घर फर्कने हाम्रो सुर थियो । तर पोखरा आएपछि प्याराग्लाइडिङ अनुभव नलिई फर्कनु मेरो मनले मानेन । हिखा कामविशेषले चितवनतिर लागी । मैले बसाइ दुई दिन बठाएँ ।
मौसम खुलेको दिन मुलुककै पहिलो ग्याराग्लाइडिङ पाइलट मानिएका राजेश बमजनलाई भेट्न गएँ । स्थानीय अग्रजहरुले प्याराग्लाइडिङ एकदम खतरनाक र डरलाग्दो भएकाले नगर्न सल्लाह दिएको र घरपरिवारले इच्छा भए उड्नु भनेकाले दुविधामा थिएँ । बमजनबाट हौसलापूर्ण सुझाव पाएँ । पाइलटिङ सिक्नेमा १५ वर्षे मिलन परियार पनि रहेको थाहा पाउँदा मेरो उत्साह दोब्बर भयो । यसले उडान शुल्क तोकिएभन्दा एक हजार घटाउन पनि मदत गर् यो ।
निश्चित समयमा उड्न म र दुई कोरियाली युवती तीन पाइलटसहित गाडीमा सराङकोट डाँडातर्फ लाग्यौँ । उड्दा के होला भन्ने कौतुहल ज्यूँका त्यूँ थियो । हामी तीन फेरि भेट्ने बाचासहित उड्ने तयारीमा लाग्यौँ । कारियालीहरुलाई नेपालीले उडाउने भए मलाई भने प्रुान्सेलीले । मेरा पाइलटले कावा खाइरहँदा जाडो हुन्छ भन्दै जगेडा ज्याकेट लगाउन सल्लाह दिए । कम उचाइकी मलाई त्यो ज्याकेटले सानो छँदा लगाएको घाँगरको सम्झना दिलायो । मलाई उड्दा आवश्यक सबै कुरा लगाइसकेपछि कसरी दौडेर उड्ने सिकाए । अनि हामीले जमिन छाड्यौँ ।
म अगाडि थिए पछाडि प्रान्सेली हर्बे । चिसो सिरेटोमा उडिरहँदा आँखैमा टाँसिने गरी माछापुच्छ्रेृ अन्नपूर्ण हिमाल देख्दा सम्पूर्ण कुरा बिसर्िएँ । चीलहरुलाई नजिकै देख्दा आफै कुनै चरा भइरहेको अनुभव भयो । मैले प्रकृति नियालिरहेका बेला हर्बेले सोधे ुआर यु अप्रुेड ु
मैले सोचे जति डर नलागेको बताएँ । उनले फेरि सोधे ुकस्तो अनुभव भइरहेको छ ु
मैले वरिपरिका दृश्यबाट अनुपम आनन्द लिइरहेको बताएँ ।
ुम हावाको बेग मिलाउँदै उडाउँछु आफूलाई सुरक्षित राख्नु वउनले सहज पारामा भने ुम सुरक्षित रहेपछि तिमी पनि सुरक्षित रहन्छयौ नि होइन ु उनको कुरा चित्त बुझ्यो ।
त्यही बेला मेरो माबाइल बज्यो । खल्तीबाट निकालें घरबाट दाइले गर्नुभएको रहेछ । मैले ढुक्कसँग कुरा गरें । तर म उडिरहँदा नै बोलेको उहाँले विश्वास गर्नुभएन । ुविश्वास दिलाउन फोटो देखाउँछु मैले भनें ।
त्यसपछि खल्तीबाट क्यामेरा झिकेर वरिपरिका दृश्य कैद गरेँ । हर्बेले एकपटक सररर राउन्ड लगाउँदा भिडियो पनि खिचेँ । २२ वर्षको पाइलटिङ पेसामा सराङकोटबाट उड्दाको जस्तो आनन्द अनुभव अन्यत्र नगरेको उनले बताए । पोखरामा तीन महिनादेखि प्याराग्लाइडिङ गराउँदै आएका उनले म जस्ता कम उमेरका नेपाली केटीलाई नउडाएको बताए र सम्झनास्वरुप क्यामेरा उल्टा पारेर दुवैको तस्बिर उतार्न आग्रह गरे । म आज्ञाकारी चेली भएँ ।
उडान अवधि १५ मिनेट मात्र बाँकी रहेको भन्दै उनले दृश्यको आनन्द लिन सुझाए । ब्यारोमिटरको मधुरो आवाजबाहेक मलाई डिस्टर्ब गर्ने कुनै चीज थिएन । सात हजार फिट हाराहारीको उचाइबाट तल देखिएका विभिन्न ताल तलैया पोखराबजार गुरुङ बस्ती र पूर्वी दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित विश्वशान्ति स्तूपले मनै चंगा बनाए । जति हेरे पनि नअघाइने मनोरम स्थलमा बसेकैले पोखरेलीहरु साहित्य संगीततिर बढी लागेका होलान् जस्तो लाग्यो ।
प्याराग्लाइडिङ ल्यान्ड गर्ने समय भयो । त्यस बेला भने मेरो कान बन्द भएर पेट उमठियो तर खासै अप्ठ्यारो केही भएन ।
दुई कोरियाली युवतीमध्ये हियुनले फेरि भेट्ने इच्छा राखेकी थिइन् । लगभग सँगै उडेका हामीलाई अवतरण पनि सँगै गराइएको थियो । हियुन नजिक आइन् र मेरो निधारको टीकातिर इसासा गर्दै सोधिन् ुआर यू अलरेडी म्यारिड ु बिहान विन्ध्यवासिनी मन्दिर दर्शन गर्दा पुजारीले लगाइदिएको टीका कपालसम्म पुगेको रहेछ । हियुनले नेपाली महिला विवाहिता हो होइन भन्ने सिउँदोको सिन्दुरले जनाउने सुनेकी रहिछन् ।
ुतपाइले सुनेको सही होु मैले अथ्र्याएँ ुहिन्दु धर्पालम्बीहरुमा पूजापछि पनि यसरी टीका लगाउने चलन छ ।ु
कारियाकै विश्वविद्यालयमा मेडिकल साइन्स पठिरहेका उनीहरु सोझै गोवाबाट पोखरा आएका रहेछन् । काठमाडौँमा भने नबसेको थाहा पाएपछि साधेँ ुघुम्न नजाने त एक चोटि ु
अघिदेखि मौन रहेकी मिनले मुख खोलिन् । मीनभवनस्थित नेपाल कोरिया डोङसान मेडिकल सेन्टरमा स्किन चेकअप गराउने इच्छा भए पनि काठमाडौँमा कुन समय बन्द हुन्छ भन्ने निधो नहुने सुनेकाले दोधारमा परेको उनले बताइन् ।
पढाइमा मभन्दा एक वर्ष सिनियर उनीहरुसँग रमाइलो गफ कलेज लाइफ’bout पनि भयो । कोरियाली सिरियल ुविन्टर सोनाटाु एकदमै मन परेको सुनाएपछि उनीहरुले आफूहरु र उताका थुप्रै किशोरी त्यसका मुख्य पात्र खान जुनसाङको फ्यान भएको बताए । कुराकानीा भुल्दाभुल्दै प्याराग्लाईडिङको कार्यालय आइपुगेछ ।
बमजन दाइले सोध्नुभयो ुकस्तो रह्यो त उड्दाको अनुभव ु मलाई प्याराग्लाइडिङमा फेरि तत्काल हुइँकिने मन थियो तर विद्यार्थी जीवनमा तत्काल साढे चार हजार रुपैँया जोहो गर्न कहाँ सक्नु !
Posted in boring writing	| Tagged Add new tag |3टिप्पणीहरु
फ्रेवुअरी 18, 2008 by PRAMB
सुरक्षित: my first writing
यो दस्तावेजलाई पासवर्डले सुरक्षित गरिएको छ । हेर्नको लागि कृपया तल आफ्ऩो पासवर्ड हाल्नुहोस् :
Posted in boring writing
Posted in boring writing	| १ टिप्पणी